MUUQAAL: Kacdoono Puntland Lagu diidan yahay oo ka Bilowday Bariga Sanaag | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Kacdoono Puntland Lagu diidan yahay oo ka Bilowday Bariga Sanaag
Nov 7, 2019 - 37 Aragtiyood
Badhan ( Kalshaale ) Magaalada Badhan ee Gobolka Sanaag waxaa maanta ka dhacay Banaanbaxyo looga soo horjeedo Mooshinkii Xilka looga Qaaday Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin DhooboDaareed.
Waxgaradka iyo Qaybaha kala duwan ee Bulshada ayaa sheegay inaaan la Qaadan karin Weerarka iyo Xil ka qaadista Gudoomiyaha Baarlamaanka, Waxayna sheegeen inaysan Jirin wax la dhaho Puntland oo Maantana lagu kala tagay.
Ahmed Karaash wuxuu haysta Fursad uu inqilaab milatari kula wareego madaxtooyada Garoowe .
Denni ma jirto shacab Taageersan maanta . Puntland waxay u baahantahay Badbaado .
Denni must Go !!!!
Reer Waqooyi maxaa Koofur ka yaalo,
Hooyada Federaal ma duminkaraan niman EXILE ku joogo Garowe.
-Waxaan u diidney Tirokoobka
-Waxaan u dooraney Hagbad wareegto
-Waa inaan Garowe la wadayeelan.
* Haloo gacangeliyo Muuse Biixi
Denni xoolo intaas buu la wareegayey . Aaran Jaan .
Reer Boosaaso iyaguna waa ka Tashanayan Puntland . Half Garoowe oo Ciise Maxamuud ah puntland ha noqoto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Calanka Somaliya ma Hooyada baa leh ??
Calanka Somaliya ma Muqdisho baa
Dameer baad tahay aan xataa awoowgii Xornimo Somaliya u soo Dagaalamin.
Calanka Somaliya waqooyiga Somaliya baa laga keenay waana joogaya .
Koonfur Banadir baad ka Degta . Calanka 🇸🇴 Nooga fuq yaa ximaar
Dhoobo Daarood waxaa qaadey DAADKA,
Midkale oo Exile ah ayaa loo dhiibi doonaa KABALYEERI BURISKA MAQAAYADDA MAX’UUD SALEEMAAN.
– Qowsaarku marbuu diidaa inuu ninka uu xoolaha u raaco – MAALO xoolihiisa.
Idinkama jeelayno inaad KHARASHKII MARTINIMO kudartaan QAS iyo Qalalaase.
Idinkama yeelayno Inaad WAALIDII REER WAQOOYI keentaa Garowe.
-Deni waa nin Reer Muqdisho ah, siduu sheegay CABSIIS SHAXAAD LOOGAMA QAADAYO,
BACAADKA AYAA AFKA LOO GALIN DHAMAAN
-EXILE REER WAQOOYI.
* Kaneecadii Iimey ayaa yaabtay.
Rag haday yihiin waa inay .haday sareen
Gudmiyaha. Madaxweynaha kudaraan ileen shacab majiree. Madaxweynaha cusub la doorta. Wayo mucaradka shacabka badan. Ee guuxaya. Hadii kale. Kuwa baarlamaanka cadaalad maha mesha rag baa xabad laysay madaxweynaha ahaan waa .cadalad daro oyo macna laan kibir dadka lagu laayo. Muxiyadiin tukaraq laga qabsaday. Kkkkkk.karash mesha iska fafhidasn kkkkkk.war mesha cadalad mataalo subanaana lah. Kursiga ka qima badan dadka xarunta loogu tagay.
“CIRKA SARE SHIMBIR U LALAY CABBAAR WAAKA DABADEED SOO DHIGA CAGAHA OO MA HURAAYO CIIDDE”
waa in la ilaaliya 4ta aag Ee difaaca puntland wana
In aan fursad la siin nabaddiidka werarka ku ah
Shacabka arimaha siyasada way dhamanayan
Wayna soo noqnoqdan … waxase muhiim ah wada
Jirka shacabka amniga shirkada ku ah in ay helaan
Amni guud oo la isku halyn karo Ilaa laga gaarayo
2021 dalkena guud ahaan waxaa ka dhacaya is
bedelo waawayn oo ku jihaysan somaliyada cusub
Meesha lacag ayaa la qaybsadaa.Markii uu Balbalaarku tagay Ksimaayo qarash ayuu soo qaaday.Tii ayaa la qaybiyay oo dhamaanba waxay u codeeyeen in la tuuro dhoob-Daarood.Way iska cadayd kkkk
Marcofoonka uunba alaga sheegayaa kkkk
Somaliya waxa aayaa ka jira – lacagta iska qaado codna iska tiri.
Oomaxay kudarsadeen marka hore dadkaa mudaharadayaa cashuur ma bixiyaan waar marti adeb daran ayaad tihiin samaroonta ku dayda oo iska ogolaada in aad tihiin dadka lagatirada badan yahay
In badan baan qoraalkaaga arkaa adiga oo hadal yaroo jilicsan meeaha la taagan, waar dadka cayda ka daah. Samaroon waa harti bari waa quruxda iyo qaayaha Somaliland.Maaha marti ee dad wadanka wackier ku leh. 8 Sanno ayay madaxweyne ka ahaayeen sideeda Hartina waanu sugaynaa inshAlh
Majeerteenu waa balaayo,Idoorku waxay somaliya uga baqaan waa Majeerteen.
Waxay taagan yihiin”waa meeshii Ilaahoow haygu celin.Waar meeshii Ilaahow haygu celinin.”
Ninka qaba gabadh quruxdan eeyarbaa laga qqadan jiray.
Boowe tani ma gaydiide ii dhaaf.
Bal idoorka ku qaad magaca majeerteen kkkk
Ama Morgan kk
Afkii Ina Askar ayaa yaabay.
BaHaL sxb ma dadka lagatirada badan yahay ayaad ka xanaaqday sxb ilaahay ayaa kugartay inaad meelaha banaan buuxi ahaato iska liq laangaab nimada illaahay inta kasokaysa iidoor ayaa iskakaale
Car juuqdhe waar sida somaliland oo kale puntland halaga dhigo kuwan aan cashuurna bixin hadana mudaharadaya halkee adoonka lagu arkay gadobguursigu iyagoo aanu cashuurta kaqaadno hadana waanu udiidnay mudaharaad
Aarka hargaysa kkkkkk
Waa runta waa inay puntland kaga dayataa somaliland sida la isku muquuniyo samaroon juuq le miyaad aragteen wa in warsangali qaata sida u u dhaqmo samaroon laangab wa lo taliyaq
Magacan iska beddel. Ninbaa halka hore ugu soo qoray in reer Muduggu Bahal u yaqaananaan canabarka dumarka. Degaankayka marka dumarka la abalabalaynayo afar xun iyo afar wanaagsan ayaa loo kala saaraa, afarta xumi waa: Baali, Basari, Bagagi iyo Bahal oo ah ta ugu xun. Adiguna Bahal ninka ragga ugu fiican baad u bixisaa, waxaad doonto iskaga hadal laakiin magac iska bedel, waa iga talo waayeel
Boowe,iska baashaal kkkk
Maxaa magacayga ku daba dhigay?
Car somaliya ku soo noqo.
Ma maqashay naag timaada meel uu joogo nin soo faraxumeeyay.Way ka carartaa.
Boowe Idoorka Majeerteen ayaa soo faraxumeeyay waagii dawlada.
Somaliya sidaa ayay uga cararaan kkkkk
Ninkiibaa meesha jooga,
Idoor,shalmad madaxa kuu soo doobo oo isyara qari kkk
Adiga hooyadaa ayaa been kuugu sheegtay inaad agoon tahay Mareexaana, aabahaana dagaalkii Isaaq dilay.
Waxay ka xishootay inay kuu sheegto inaad tahay GARAC aabahaana Isaaq yahay!
Boowe,shalmad madaxa soo saaro – meesha Majeerteenkii ayaa jooga.
Ama la buuraanbur Dumarka Daarood sidii caadada kuu ahayd.
Nin Naag la buraanburaya kk
Nacaskii Idoor ee madaxa shalmada ku qarnayay markii ragii arko.
Moorgaan ayaa Tuka raq yimid kkk
Ina adeertay Farxiyo iyo Iidoor yare rabay in u jawaabo, xoogaana waqtigu waa igu yaryar oo shaqo safar ku jiraa saacadaan idin la hadlo.
Aniga caawa in Harti luqunta qoorta iskula jiraan waan ka xumahay..Weliba bah-habar-Majeerteen iyo Halamash..kkkkkkkk
Deni waa ey hadduu Dhoobo-Daareed oo maliishiya dhigtay xarunta parlemanka ciidan kula dagaala u diray..in sidii Galan iyo general Muxyadiin dhiig la iska ilaaliyo ahayd oo wada hadal la furdaamiyo…..!!!
Deni isna cago badan kuma taagna waayo nin aqli badan ma xanaaqo oo dalka xukums oo shir kama cararo haddana inta awood isbido magaalada dagaal kama rido, dad ku dhinteen.
Haddaan Dhabayaco aqaan Deni 4 sano dhamaysan maayo.
Maanta Puntland qas ka jiraa oo habar dugaag oo dhan libaaxyada is dilay in cad ka helaan waaqwaaq ku hayaan. Don’t be sure in wax isbedeleen.
Puntland in madaxda iyo siyaasiinta is cayrasaan oo isjiidjiidaan waa ka caadi laakiin maalinta aminaga iyo jiritaanka Puntland qatar galo….ragaan ayaa u taagan oo kaadi usoo cabay in caruurtooda sharaf ku noolaadaan…. Madaxa la isjabin.
Watch ciidanka Puntland 8 ciidan oo kala amar qaadan ah.
Nothing will happen to Puntland, waa last place Somalia chaos ka dhici karo.
Watch 5 daqiiqo, this clip from 2019.
Wax cusub maaha inaad Gudoomiye Baarlamaan oo Waaroos ah xabad kaga caydhisaan Garoowe. Intaan hubo 4 jeer oo hore tanoo kale waa samayseen.
Waxaase la yaabay in Suldaankii Warsangeli, Xalay intaan xabadu dhicin, Deni bahdilo amara ku siiyo inuu madaxtooyada ka baxo kuna laabto meeshuu ka yimi ( akhri Badhan).
Arinkaas waa ceeb in oday dhaqan saa cumaamada looga rido!
Watch hub, iyo ciidan deceplin leh.
Ma in ciidankaan ayaa militia xoog ku qabsan karaan.
Ciidanka maaha in soo dhexgalaan madax is cayrsanaysa, shaqadooda waa cadowga dibedda.
Shacabka iyo siyaasiinta iyo waxa isku haystaan arimaha gudaha, waa hawl u taal maamulka.
Laakiin raggii Kacaankii awr usoo dhaansaday in buulka yar oo maxasta ugu jiraan in N&N iyo najiska kale dumiyaan laga yeelimaayo.
Ha karaamo seegina habaar lagu kari waa Dhul-Udug.
Anoo rabay in wax kale ka hadlo ayaad difaac i galisay…kkkkkkk
Idinka Harti iscayrsanaya haddaad aragtaan sida dugaaga chance helay ku jirtaan iyo ka dhex kaluumayso. kkkkkkkk
Cadde Muuse iyo Cabdulahii Yusuf Carro Isaaq isla galeen, Geel Afweyn, Jaamac Cali Jamac orod ku galay Xamar.
Gaas oo General Muxyayadiin ciise Maxamud Garoowe ku dhashay cayrsanaya markuu Baddii Hurdiya soo celisay isdhiibay.
Galan baa isku dayey in Bossaso qas kiciyo, waad ogeyd markii buurihii Golis naftii qabay in is dhiibay.
Meesha Warsangeli iyo reer lagama yaqaan.
Puntland ninkii la doortay baa looga dambayn 4 sano dhamaysanayo.. dalkaan rag baa ilaa shada.
Mideeda kale meel warsangeli la cayrsaday hadda ka hor noosheeg..
Awal Dhabayacada ayaa is cayrsan jirtay, hadda Warsangeli ayaa xiniinyo lasoo baxay in ciidan xoog ku jooga Parlemanka keeneen.
Waa balan in sidii Cadde Muuse, Jamac Cali Jamac, Galan, Muxyadiin iyo kuwo kele, caska waaga iyo fiid baqo ku caatoobaan..kkkkkkkkk
Puntland ma meel Dhoobo-Daareed iyo Deni dumin karaan ayaad mooday….midkoodna meesha macbe kama laha…Dalka boqortooyo fac weyn ayaa degen..rag siyaasad isku haya, waa kala baxa idinka, laakiin no worry for Puntland aka Dhulka Uduga
Walaahi ma rabin, maantana hal mar fikir kama dhiiban arinkan.kkk
Laakiin markaan xaqiijay in Suldaankii Wersangeli Garoowe laga mastaafuriyay. Baan su, aasha ku weydiiyay.kkk
Hadii Su, aashu ku dhibtay raali ka noqo!
Waxaad hilmaantay in Faroole inta sidan oo kale qafil Baarlamaanka saaray oo wiilal uu adeer yahay dhigtay yiri car yaa u soo gala xilligii Cadde Muuse oo inta lasoo galay 4 ciise maxamuuda oo labo walaalo tahay la is dul saaray.
Faroole baqa cararkii uu galay ilaa Australia aanu istaagin kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Lop & Xaange
Kaftanka markaan meel aynu ku yara Parking garayno;
Nidaam dawladeed ayaa Puntland ku shaqaysaa, masuulka balantii nidaamkaa lagu doortay raba inuu mijaxaabiyo isagaa cirka roob ku og. Gudoomiyaha Barlamanka runtii Villadaa ka dhex hadlaysa. Taasna waxaa ii cadaysay waraysi uu xalay 2 dii habeenimo/subax bixiyay.
Puntland nabadeeda ha ilaashato, dadka ku nool bay dan u tahay, Umadaha ay la deriska tahay sida Jamhuuriyada Somaliland iyo Itoobiya.
Markaa waxii degenaanta iyo nabada Puntland ka soo horjeeda iska qabta. Haday dhinaca Somaliland u soo yaacaana waa idiin soo celinaynaa.
Suldaan aad sheegaysid waa awr kiraale idin shaqeeya, maaha in hadda bilaabay, 15 sano lasoo dhaafay wuxuu degenaa Haygeysa, Cali Khaliif waa nin ka Somalilandersan, run.
Isaaqa Cali Khaliif iyo Suldaan Siciid waa labada nin oo Somaliland ay waxwalba dhul dhigeen, waayo waa labada nin Warsangeli iyo Dhulbahante gacantooda soo gelin karaan aaminsan yihiin.
Taas yaan ogeyn.. Caruurta iyo dumarka ayaa taas xitaa og.
Waa basaas, mana aha in Ceerigaabo noosoo dhaafo.
Puntland horta cadow badanaa?
Meel cidwalba rabto in lugoyso macal kuwa quudiyaan.
Laakiin mid aan idiin sheego, dhulka Somali Puntland waa 1/3 kii xitaa cadownimo ugu yimid markuu arko in cidna meel ka yimid aqoon cidna ku mashquulsanayn waxa yahay Jeer iyo Jileec..hubka dhigin oo dadkiisa dhinac ka raacaa..kkkkkk
In Warsangeli damceen in meesha xoog ku xumumaan hala yaabin, dadka dhulka dega makala yaqaanaan Deni iyo Dhoobo Dareed…kkkkkkk
Laakiin midbay ka siman yihiin, maamul iyo dowladnimo iyo kala damabayn….ilaa taas qatar gasho isma raaci karaan..run
Walaahi in reer Puntland waa reerkayga nin ugu dagaalayn… Boowe rabshada daa, haddaad wax isku hayso maxaa laguu dooran waayey..
Boowe cidda meel ka fariiso oo shidada naga daa…kkkkkk
True..waa arin darsay.
Waa run in Faroole oo ragga qadiriyo Puntland ku jira, in mar hore iska dhaadhiciyey Garoowe tolkaa baa dega ee xoog wax ku raadi, waa tii asaga iyo wixii la socday Ilaa Australia break qaban, general Muxyadiin ayaa is yiri, anoo Ciise Maxamud oo jooga Garoowe, Gaas Garoowe kaama cayrsan karo oo ku qasbanaan in i laaluusho..kkkkkkk
Galan ayaa is yiri, Cali Saleeban kuu dagaalin, Cade iyo Jamac Cali Jamac ayaa is yiri Cismaan Maxamuud kuu Dagaalin.
Kulli waa ku qasaareen in jifo u dhimato..
Boowe dowladda la heshii wiil aad Puntland ku dumiso ma hayno..
Doobo Daareed asagana saaxiga keenin.
Meesha waa xarun Nidaam iyo dowladnimo dhaqan u leh.
Puntland ma rabto in Somaliland dhib u yimaado..
Weligoodna colaad Somaliland kama shaqayn.
Idinka inta cutiraaf raadinaysaan in xad gudubtaan iska ilaaliya.
Citiraafka wado kale u mara, not qas Puntland
Taariikh run ah baad sheegtay. Lkn Kuwa idoor ee ku xagxaganaya waa Jaadwalayaal ee ha u Jawaabin. Hargiesa iyo Burco suuqyada waxaa buuxa dad Jaadku waalay oo dharka Sita kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reer Boorame waa dadkii xadaarada Somaliya loogu yimid , waana dadkii Baray idoorka sida loo cadeydo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Aarka Hargiesa isaguba waa Arab oo hargeisa waa ku dulman yahay marka waaba khalad inuu reer Boorame ku Rafdo kkkkkkkkkk
Miskiinkan ha lugoynin, shalay uun bay ahayd markuu sida South Sudaneseka summadda iskaga dhigay jiray dhabannadee, u dhaaf dadkaas ha ugu booteeyo ilbaxnimadii Adal iyo Harar oo aanu shaqo ku lahayne. Ta kale, cawriyo waxyaalo noocaasaa lagu sheegayye miyaanad nin ilaahiisa ka baqanae ahayn markaad ku talo gelayso inaad lugoyso.
Aarka Hargeysa maaha Arab iyo cid kale toonee waa agoontii kacaanka, dadka miyaanad fartooda kala aqoon..